Qarax Lagu Dhaawacay Sarkaal Oo Ka Dhacay Wadada Makka Ee Magaalada Muqdisho.
Wednesday November 08, 2017 - 11:21:19 in Wararka by Super Admin
Jugta qarax xooggan ayaa maanta barqadii ka dhacay wadada Mashquulka badan ee Makka Al-mukarrama waxaana qaraxaas lala eegtay sarkaal sare oo katirsan dowladda Federaalka.
Qaraxa oo ka dhacay agagaarka xarunta Imigareeshinka ayaa sababay dhaawac halis ah oo soo gaaray Mas'uul katirsan wasaaradda caafimaadka DF-ka, ilo wareedyo ayaa sheegaya in sarkaal magaciisa lagusoo gaabiyay Xiris uu si xun ugu dhaawacmay qaraxa.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhashay gudaha gaariga waxaana muuqata in u ahaa nuuca gaadiidka lagu dhejiyo, wadada Makka Almukarrama ee qaraxu ka dhacay ayaa ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyaa waxaana ku sugan ciidamo isugu jira soomaali iyo AMISOM.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay Mas'uuliyadda qaraxa lagu dhaawacmay sarkaalka magaciisa lagusoo gaabiyay Xirsi ee katirsan wasaaradda Caafimaadka.
28,October 2017 ayay aheyd markii qarax iyo weerar Mataana ah lagu dilay ugu yaraan 70 qof oo ubadan saraakiil katirsan dowlada Federaalka Soomaaliya uu ka dhacay Hotelka Naasa Hablood2 ee kaabiga ku haaya madaxtooyada Villa Somalia.